KEDU IHE BỤ SVCHOST.EXE NA TASK MANAGER? - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
SVCHOST.EXE bụ otu n'ime usoro dị mkpa mgbe ị na-agba Windows OS. Ka anyi gbalịa ichota oru ndi ozo n'olu ya.
Ozi banyere SVCHOST.EXE
SVCHOST.EXE nwere ike ile anya na Task Manager (ịga Ctrl Alt + Del ma ọ bụ Ctrl + ịgbanwee Esc) na ngalaba "Usoro". Ọ bụrụ na ịnweghị ịhụ ihe nwere aha yiri ya, wee pịa "Gosi usoro ntinye ọrụ niile".
Maka mfe nke ngosi, ị nwere ike pịa aha ubi. "Aha njirimara". A ga-ahazi data niile dị na ndepụta n'usoro ederede. Usoro SVCHOST.EXE nwere ike ịrụ ọrụ nke ukwuu: site na otu na nke a na-ebighi ebi. Na omume, ọnụọgụ kọmputa na-ejedebe ọnụ ọgụgụ nke arụmọrụ na-arụ ọrụ n'otu oge, ikekwe, ike CPU na ọnụego RAM.
Ugbu a, anyị ga-akọwapụta ọrụ dị iche iche nke usoro a na-amụ. Ọ bụ ọrụ maka ọrụ ndị ọrụ Windows ndị a na-ebu site na ụlọ akwụkwọ dll. Maka ha, ọ bụ usoro nhazi, ya bụ, isi usoro. Ọrụ ya n'otu oge maka ọtụtụ ọrụ dị iche iche na-echekwa nchekwa na oge iji mezue ọrụ.
Anyị echeworị na usoro SVCHOST.EXE nwere ike ịrụ ọrụ. A na-arụ ọrụ otu mgbe os malitere. Ihe ndị fọdụrụ na-amalite site services.exe, nke bụ Njikwa Ọrụ. Ọ na-esite na ọtụtụ ọrụ ma na-agba SVCHOST.EXE dị iche maka nke ọ bụla n'ime ha. Nke a bụ ihe kacha mkpa ịzọpụta: kama ịmepụta faịlụ dị iche maka ọrụ ọ bụla, SVCHOST.EXE na-arụ ọrụ, nke na-eweta ọnụ ọgụgụ ọrụ dum, si otú ahụ belata ọkwa nke CPU na ọnụ nke RAM PC.
Ugbu a ka anyị chọpụta ebe SVCHOST.EXE faịlụ dị.
Fọm SVCHOST.EXE na usoro ahụ dị naanị otu, ma ọ bụrụ na, n'ezie, ọ bụ onye na - ahụ maka nje na - emepụta ihe abụọ. Ya mere, iji chọpụta ọnọdụ nke ihe a na draịvụ ike, pịa nri na Task Manager maka nke ọ bụla n'ime aha SVCHOST.EXE. Na ndepụta ndị dị na ya, họrọ "Mepee ebe nchekwa nchekwa".
Na-emeghe Explorer na ndekọ ebe SVCHOST.EXE dị. Dịka ị nwere ike ịhụ site na ozi dị na ebe nkesa, ụzọ na ndekọ a bụ:
N'okwu ndị dị oke egwu, SVCHOST.EXE nwere ike iduga na nchekwa
ma ọ bụ n'otu n'ime folda dị na ndekọ ahụ
Na ndekọ ọ bụla ọzọ, SVCHOST.EXE ugbu a enweghị ike iduga.
Ntak SVCHOST.EXE na-eburu usoro ahụ
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-ahụ ọnọdụ ebe otu usoro SVCHOST.EXE na-eburu usoro ahụ. Ya bụ, ọ na-eji nnukwu RAM buru ibu, na ibu ọrụ CPU na ọrụ nke ihe omume a karịrị 50%, mgbe ụfọdụ na-eru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100%, na-eme ka arụ ọrụ na kọmpụta fọrọ nke nta ka ọ gaghị ekwe omume. Nke a nwere ike inwe isi ihe ndị a:
Usoro ngbanwe nke nje ahụ;
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke oge na-agba ọsọ enyemaka-ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ;
Nsogbu na Mmelite Nwelite.
A kọwara nkọwa maka otu esi edozi nsogbu ndị a na isiokwu dị iche.
Ihe ọmụmụ: Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na SVCHOST na-ebu ihe nhazi
SVCHOST.EXE - nje virus
Mgbe ụfọdụ, SVCHOST.EXE na Task Manager na-eme ka ọ bụrụ onye na - elekọta nje virus, nke, dịka e kwuru n'elu, na - ebute usoro ahụ.
Ihe mgbaàmà kachasị nke usoro ịrịa ọrịa nke kwesịrị ịdọta mmasị onye ọrụ ozugbo bụ na ha na-eji ọtụtụ usoro ihe onwunwe, karịsịa, nnukwu ibu CPU (karịa 50%) na RAM. Iji chọpụta ma ezigbo SVCHOST.EXE na-ebu kọmputa ahụ, rụọ ọrụ Task Manager.
Nke mbụ, ṅaa ntị n'ọhịa ahụ "Onye ọrụ". Na nsụgharị Os os dị iche iche a pụkwara ịkpọ ya "Aha njirimara" ma ọ bụ "Aha njirimara". Naanị aha ndị a nwere ike isonyere SVCHOST.EXE:
Ọ bụrụ na ịchọta aha kwekọrọ na ihe a na-amụ, na aha ọ bụla nke onye ọrụ, dịka ọmụmaatụ, site na aha profaịlụ dị ugbu a, ị nwere ike ijide n'aka na ị na-eme nje.
Ọ dịkwa mma ịlele ebe faịlụ ahụ dị. Dị ka anyị na-echeta, na ọtụtụ ndị ikpe, na-ewepu abụọ dị mkpirikpi, ọ ga-edekọ na adreesị:
Ọ bụrụ na ịchọta na usoro ahụ na-ezo aka na ndekọ nke dị iche na nke atọ ahụ a tụlere n'elu, mgbe ahụ anyị nwere ike iji obi ike kwuo na e nwere virus na usoro. Karịsịa, nje ahụ na - agba mbọ zoo na nchekwa "Windows". Ị nwere ike ịchọpụta ebe faịlụ na-eji Onye nduzi dị ka a kọwara n'elu. Ị nwere ike itinye nhọrọ ọzọ. Pịa aha aha na Task Manager na bọtịnụ òké aka. Na menu, họrọ "Njirimara".
A ga-emepe windo aha ya, nke n'ime tab "General" enwere oke "Ebe". N'akụkụ ya, e dekọrọ ụzọ ahụ na faịlụ ahụ.
E nwekwara ọnọdụ mgbe faịlụ nje ahụ dị na ndekọ ahụ dị ka nke mbụ, ma nwere aha dịtụ gbanwere, dịka ọmụmaatụ, "SVCHOST32.EXE". E nwere ọbụna ikpe mgbe, iji duhie onye ọrụ, ndị omekome kama iji mkpụrụ akwụkwọ Latin "C" tinye "C" Cyrillic n'ime faịlụ Trojan ma ọ bụ karịa akwụkwọ ozi "O" tinye "0" ("efu"). Ya mere, ọ dị mkpa iji nlezianya tụlee aha usoro ahụ na Task Manager ma ọ bụ faịlụ nke na-ebute ya, na Explorer. Nke a dị mkpa karịsịa ma ọ bụrụ na ị hụ na ihe a na-erepịa ọtụtụ usoro ihe onwunwe.
Ọ bụrụ na e jidere ụjọ ahụ, ị ​​chọpụtakwara na ị na-ebute virus. I kwesiri ikpochapụ ya ozugbo enwere ike. Nke mbụ, ịkwesịrị ịkwụsị usoro ahụ, ebe ọ bụ na ịmalite ime ihe niile ga-esi ike, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ọ bụla, n'ihi ibu ọrụ CPU. Iji mee nke a, jiri aka nri pịa usoro nje na Task Manager. Na listi, họrọ "Mezue usoro".
Na-agba obere windo ebe ịkwesịrị ikwenye ihe ị na-eme.
Mgbe nke ahụ gasịrị, na-enweghị ịmegharị, ị ga-enyocha kọmputa gị na usoro antivirus. Ọ kacha mma iji DrWeb CureIt maka nzube ndị a, ebe ọ bụ na ọ gosipụtara onwe ya kacha mma n'ịlụso nsogbu nke ọdịdị a.
Ọ bụrụ na iji ọrụ ahụ enyereghị aka, mgbe ahụ ị kwesịrị iji aka wepụ faịlụ ahụ. Iji mee nke a, mgbe usoro ahụ gasịchara, kwaga na nchịkọta ọnọdụ ebe, pịa aka na ya wee họrọ "Hichapụ". Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na igbe okwu anyị kwadoro ebumnuche ịhichapụ ihe ahụ.
Ọ bụrụ na nje ahụ mechie usoro iwepụ, weghagharịa kọmputa ma banye na Nchekwa Nchekwa (Mgbanwe + F8 ma ọ bụ F8 mgbe na-ebu ibu). Mee nhichapụ faịlụ site na iji algorithm n'elu.
N'ihi ya, anyị chọpụtara na SVCHOST.EXE bụ usoro usoro Windows dị mkpa nke na-arụ ọrụ maka mmekọrịta na ọrụ, si otú ahụ belata njikwa nke ihe onwunwe. Ma mgbe ụfọdụ usoro a nwere ike ịbụ nje. N'okwu a, n'ụzọ dị iche, ọ na-amanye ihe ọṅụṅụ niile na usoro ahụ, nke chọrọ mmeghachi omume ozugbo nke onye ọrụ iji kpochapụ onye ọrụ ọjọọ ahụ. Na mgbakwunye, enwere ọnọdụ ebe ọ bụ na ọdịda dị iche iche ma ọ bụ enweghị njikarịcha, SVCHOST.EXE n'onwe ya nwere ike ịbụ isi iyi nsogbu.